भारतबाट प्रदेश ५ मा २ लाख भित्रिए, ९ सय मात्रै बसे क्‍वारेन्टाइनमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोरोना अस्पताल र परीक्षण प्रयोगशाला तयार
चैत्र १६, २०७६ घनश्याम गौतम
रूपन्देही — प्रदेश ५ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट जोगिन भारतीय सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर परीक्षण सुरु गरेपछि शनिबार साँझसम्ममा २ लाख १३९ जना नेपाल भित्रिएका छन् ।
खुल्ला सिमाना रहेको प्रदेश ५ का विभिन्न नाकाबाट भित्रिनेको संख्या अहिले पनि बढ्दो छ । सिमानामा राखिएका हेल्थ डेस्कमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घर जानेहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रयास गरे पनि अधिकांश सम्पर्कमा आएका छैनन् । कोरोनाको संक्रमण फैलिएको भारतबाट आएकाहरूलाई स्थानीय तहहरूले खोज्दा भेट्टाएका छैनन् ।
प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयको रेकर्ड अनुसार भारतका विभिन्न सहरबाट फर्किएका उनीहरू मध्ये अहिलेसम्म प्रदेश ५ का विभिन्न स्थानीय तहमा झण्डै ५ सय ५० जना मात्र क्वारेन्टाइनमा छन् । बिहीबार र शुक्रबार बेलहिया नाकाबाट भित्रिएका २८ नेपालीलाई तिलोत्तमाको दुर्गादत्त माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
प्रदेश ५ का निमित्त प्रहरी प्रमुख नरबहादुर खत्रीले अहिलेसम्म सबै जिल्लामा गरेर १ सय ९० क्वारेन्टाइन स्थापना भएको जानकारी दिए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रहरीले २ हजार २ सय ९९ बेडका क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छ । ‘अहिले प्रहरी र जनप्रतिनिधिको सहकार्यमा वडास्तरमा बाहिरबाट आएकाको खोजी गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा बाहिरबाट आएकाहरू घरमै क्वारेन्टाइनमा बसेको भन्ने पनि छ ।’ प्रशासन र स्थानीय तहको सम्पर्कमा आएका र खोजीका क्रममा भेटिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेशका विभिन्न ४० नाकामा सुरक्षाकर्मीसहितका हेल्थ डेक्स राखिएको छ । सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्यकर्मीले नाकामा परीक्षण गर्ने गरेको भएपनि ठुलोसंख्यामा भित्रिएका सर्वसाधरण अहिले क्वारेन्टाइन भन्दा घरमै बसिरहेका छन् ।
प्रदेश ५ का स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश ५ मा ७७ जना कोभिड–१९ को संक्रमणको आशंकामा अस्पताल पुगेका छन् । ती मध्ये ५२ जनाको स्वाब संकलन गरिएको र २५ जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको उनले जानकारी दिए । ‘अझै २७ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हवाई यातायात बन्द भएपछि स्वाब परीक्षणका लागि पठाउन समस्या भएकाले रिपोर्ट आउन पनि ढिलाई हुने गरेको छ ।’
सरकारले प्रदेशका विभिन्न चार स्थानमा स्थापना गरेका कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका दुई दर्जन बढी शंस्कास्पद बिरामी भएपनि जोखिम नभएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमै कोरोना उपचार केन्द्र र प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । भैरहवास्थित भीम अस्पताललाई संक्रमण उपचार अस्पताल र भैरहवाकै गहुँ बाली अनुसन्धान केन्द्रमा प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।
अस्पताल संचालमा आइसकेको र प्रयोगशाला आइतबार बेलुका देखि नै संचालनमा आउने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रयोगशालाका सामग्री आइसकेको र अहिले जोड्ने काम जारी रहेकाले आजै साँझ वा सोमबार बिहानदेखि परीक्षण सुरु गरिने बताए ।
‘प्रयोगशाला सञ्‍चालनमा आएपछि तत्कालका लागि कोरोना मात्र परीक्षण भएपनि भविष्यमा अन्य संक्रामक रोगको पनि परीक्षण गर्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना हुनेछ ।’ भीम अस्पतालमा भने कोभिड–१९ ‘पोजिटिभ’ बिरामीलाई मात्र उपचार गर्ने गरी ३० बेड तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७६ १३:१५
चैत्र १६, २०७६ सम्पादकीय
मुलुकमा एक सातामै चार जना कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित भेटिएका छन् । संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा सर्सर्ती हेर्दा नगन्य देखिने यो संख्या नेपालका लागि आफैंमा जोखिमको ठूलो संकेत हो । किनभने, हामी संक्रमित पहिचानको लगभग पहिलो चरणमा देखिन्छौं ।
फ्रान्स, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र बेल्जियमबाट फर्केका यी चारमध्ये एक जना काठमाडौंका र अरू तीन जना क्रमशः धादिङ, धनगढी र बागलुङ पुगेका छन् । यसबीचमा उनीहरू कहिले, कहाँ–कहाँ गए, कस–कसलाई भेटे भन्नेबारेको सम्पूर्ण यात्रा विवरण हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूले जुटाउनै सकेका छैनन् । विदेशी भूमिबाट काठमाडौं आउँदा, यहाँ घुमफिर र बसोबास गर्दा, अनि काठमाडौंबाट उपत्यकाबाहिर आफ्नो घरसम्म जाने क्रममा उनीहरूको कति जनासँग सम्पर्क भयो होला ? सार्वजनिक गाडी र हवाइजहाजमा यात्रा गर्दा संक्रमण सर्‍यो/सरेन ? अहिले हतपत्त पत्ता लगाइहाल्नुपर्ने विषय हुन् यी । तर सरकारी निकायले सुरुमा गरेको हेलचेक्र्याइँको परिणामस्वरूप उनीहरू सबैको पहिचान गर्न अहिले हम्मेहम्मे परिरहेको छ । तर, जसरी भए पनि उनीहरूको यात्रा विवरण दुरुस्त उतारेर सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखी अवलोकन गर्नुको अरू विकल्प छैन । समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरूले यसका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नैपर्छ । नत्र यो गाउँ–सहरमा भुसको आगोझैं भित्रभित्रै सल्किन थाल्यो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर समेत जान सक्छ ।
सरकारले सुरुमै ठूलो गल्ती गर्‍यो— संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको मुलुकबाट स्वदेश भित्रिन निर्धक्क र खुलेआम दिइरह्यो । यसको मतलब उनीहरूलाई आफ्नो मुलुक आउनै दिनु हुँदैनथ्यो भन्ने होइन । तर कतिपयले संक्रमण पनि बोकेर ल्याएका हुन सक्ने भएकाले उनीहरू भित्रिँदा पर्याप्त सावधानी अपनाइनुपर्थ्यो, जुन स्तरको सजगता हामीले संक्रमणको पहिलो इपिसेन्टर मानिएको चीनको वुहान क्षेत्रबाट नेपालीहरू ल्याउने क्रममा अपनायौं । सबैलाई त्यसैगरी राज्यले नै क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव हुँदैनथ्यो होला । तर कुन–कुन व्यक्ति कहाँका हुन् भन्ने पर्याप्त जानकारीसहितको अभिलेख राखी उनीहरूलाई कम व्यक्तिको सम्पर्कमा घर पुग्ने प्रबन्ध मिलाएर आफैं क्वारेन्टाइनमा बसे–नबसेको अनुगमन गर्ने व्यवस्थासम्म त मिलाउन सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय युरोप, मलेसिया र खाडी क्षेत्रमा पनि संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले ती मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा थोरै पनि हेलचेक्र्याइँ गर्न मिल्दै–मिल्दैनथ्यो । यस्तै लापरबाही भारततर्फ पनि गरियो । सीमा नाकामा पर्याप्त जाँच गर्दै गरिएन । त्यहाँबाट हूलका हूल बाँधिएर आएकाबाट संक्रमण देखियो भने के गर्ने, रोकथाम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अहिलेको ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
त्यसैले हामी फेरि पनि दोहोर्‍याउँछौं— अहिले लगाइएको ‘लकडाउन’ आफैंमा सम्पूर्ण समाधान होइन । यो त समाधानको बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने एउटा माध्यम मात्र हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण स्थानीय स्तरमा फैलनबाट रोक्न विदेशबाट आएका र तिनको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान, निगरानी र परीक्षणको दायरा बढाउनैपर्छ । यसमा जति ढिलाइ गरिन्छ, समस्या उति जटिल बन्न सक्छ । अहिलेसम्म संक्रमित पाइएकाहरू सबै जना आफैं शंका लागेर अस्पताल पुगेका हुन् । यसको अर्थ हो, सरकारी निकाय अग्रसक्रिय भएर शंकास्पद व्यक्तिहरूको पहिचान गरी परीक्षण संख्या बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या अरू बढ्न सक्नेछ । परीक्षणका दायरा तीव्र रूपमा बढाइएन भनेचाहिँ भित्रभित्रै संक्रमण फैलिने डर हुन्छ । समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिनबाट रोक्न अहिले नै अबेला भइसकेको छ । अझै पनि ढिला भयौं भने क्षतिको मात्रा अरू बढ्न सक्छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले हालसम्म करिब ८ सय ७५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको छ । यसमा एकतिहाइ संख्या त चीनको वुहानबाट फर्किएकाहरूको दोहोरो परीक्षणकै छ । त्यसैले प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमताअनुसार दिनकै सयौं शंकास्पदहरूको परीक्षण गर्नैपर्छ । प्रयोगशालाको पूर्वाधार र जनशक्ति बढाएर, यसलाई प्रदेशहरूमा विस्तार गर्ने निर्णय चाँडो लागू गरेर सक्दो बढी व्यक्तिको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अब पनि ढिलो गर्नु भनेको ठूलो मूल्य चुकाउन तयार हुनु हो । राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे बेलैमा मनन् गर्नुपर्छ ।
संक्रमण फैलिएका मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरू भएको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरको लकडाउनलाई पनि धेरै कडाइ गरिनुपर्छ । जस्तो, सुदूरपश्चिम प्रदेशका एउटै गाउँमा भारतबाट फर्केकाहरू धेरै छन् । तीमध्ये कसैलाई संक्रमण भएको रहेछ र उसको सम्पर्कमा धेरै व्यक्ति पुगे भने स्थिति भयावह हुन सक्छ । त्यसैले राज्यका संयन्त्रहरूले स्थानीय समुदायमा लकडाउन गर्नुका साथै सेल्फ क्वारेन्टाइन, व्यक्तिगत दूरीबारे सचेतना अभिवृद्धिमा पनि जोड दिनुपर्छ । सरकारले गम्भीर भएर के ख्याल गर्नुपर्छ भने संक्रमण फैलिसकेपछि नियन्त्रणमा ल्याउनुभन्दा अहिल्यै रोकथामको प्रयास गर्नु बढी सहज छ । त्यसैले यसका लागि सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरूको उचित परिचालनमा कुनै कसर बाँकी छोड्न हुँदैन ।
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७६ १३:१३